पत्याउनुहुन्छ ? एउटै कोखबाट जन्मिएका यि आमा र छोरा » Khulla Sanchar
पत्याउनुहुन्छ ? एउटै कोखबाट जन्मिएका यि आमा र छोरा
एजेन्सी : सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ । स्वीडेनकी इमिली इरिक्सन र उनका छोरा एउटै कोखबाट जन्मिएका हुन् । जन्मजात कोख नभएकी इरिक्सनको सन्तान जन्माउने सम्भावना थिएन । तैपनि उनको आशा मरेन । जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने जस्तै दुई वर्षअघि उनले आफ्नै आमाको कोख प्रत्यारोपण गरिन् । जुन उनी जन्मिएको कोख थियो र त्यही आमाकै कोखबाट छोरा (अल्बिन) जन्माउन सफल भइन् ।
झट्ट सुन्दा काल्पिनक कथा जस्तो लाग्छ उनलाई । ‘तर यो वास्तविक घटना थियो,’ उनी थप्छिन्, ‘तपाईले भविष्यमा कुनै इतिहासको बारेमा पढ्नुभयो भने सम्भवत इतिहासको एक अंश म पनि हुनेछु । ’
सफल कोख प्रत्यारोपणपछि इरिक्सनको सजिलै गर्भ बसेको थियो । स्वीडनका डा. ब्रानस्टोर्मले नेतृत्व गरेको टोलीले कोख प्रत्यारोपण गरेका थिए ।
इरिक्सन (हाल ३० वर्ष) को १५ वर्षको उमेरसम्म पनि मासिक धर्म सुरु नहुँदा अलमलमा परेकी थिइन् । उपचार गर्ने क्रममा उनको कोख नै नभएको खुलासा भएको थियो ।
२० औ जन्मदिन मनाएको केही सातापछि वैज्ञानिकहरुले कोख प्रत्यारोपणको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको समाचार उनको कानमा ठोकियो । सुन्दा असम्भव लागे पनि उनलाई विश्वास गर्न करै लाग्यो । तत्कालै प्राध्यापक ब्रानस्ट्रोमसँग भेट गरिन् । इरिक्सिनले प्रत्यारोपणबारे आमालाई अनुरोध गरिन । आमाले पनि जतिसक्दो चाँडो प्रत्यारोपण गर्ने सुझाब दिइन । ‘अब म बयस्क भए । मलाई कुनै कोख आवश्यक छैन । मेरो कोखबाट तिमीले पनि बच्चा किन नजमउने ?’ आमाले भनिन् । इरिक्सलाई के खोज्छस् कानो आखो भने जस्तै भयो ।
तत्कालै इरिक्सले प्राध्यापक ब्रानस्र्टोमलाई इमेल गरिन् । आमा छोरीको धेरै परीक्षण भए । उनका पति डेनियल क्राइ पनि सासुको कोख पत्नीलाई पत्यारोपण गर्न राजी भए । अन्तत आमाको कोख बच्चामा सफल प्रत्यारोपण भएको थियो । एक वर्षपछि उनी आईभीएफ पद्दतिद्धारा गर्भवती बनिन् । प्राध्यापक ब्रान्सस्ट्रोमले नेतृत्व गरेको एउटा समूहले उनको कोखमा एउटा भ्रूण राखिदिएको थियो । पहिलो प्रिगनेन्सी टेस्ट बिफल भए पनि एक सातापछि उनको सपना साकार भएको थियो ।